Bhaket Chinyorwa Chinyorwa: Matatu musts yerwendo rwekupedzisira rweSychelles vasikana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Bhaket Chinyorwa Chinyorwa: Matatu musts yerwendo rwekupedzisira rweSychelles vasikana
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Seychelles Vasikana Rwendo
Zvemabasa ezuva nezuva hazvisi zvekumanikidza chete asiwo zvinonetesa uye kuzviparadzanisa. Ichi chikonzero nei getaways yakakosha.
Uyai pamwe nevakadzi vana ava pavanenge vachizadzisa mabhaketi ezvinyorwa uye vanakidzwa nerwendo rwevasikana kuSychelles dzakanaka.
Island hopping ndeyechokwadi inofanirwa mune ino inoshamisira uye inoshamisa yezvitsuwa.
Uye nderupi rwendo rwunogona kuve rwakakwana pasina kufemeruka uye chikafu chinonaka - chausingafanire kuzviitira iwe?
Inga, Sheila, Ifat, naEla vakatora zororo kubva kuhupenyu hwavo hwekushushikana, vakasvetukira mundege kuenda kuSeychelles kuti vanzwe, kure nechaunga chevanhu, chingangodaro chiri rwendo rwavo rwevasikana rwakanakisisa!
Iyo quartet yakanangana neruzivo rwavo kutenderedza pfungwa yechitsuwa chakakombama, chakanangana nezviwi zveMahé, Praslin neSte. Anne. Ivo vakasangana nemufaro mukuru kutenderera kwechitsuwa chikuru cheMahé, vachiongorora uye vachitora mifananidzo kutenderedza akakurumbira enhoroondo netsika nzvimbo dzakatenderedza guta diki reVictoria. Ivo vakanakidzwa neakanyanya kuona kunoshamisa kubva kuMission Lodge, vasina mweya muBritish botanist's Marianne North mifananidzo, yakatarisana nekumaodzanyemba mhiri kweMahé, uye vakaongorora nekufarira Seychelles 'UNESCO World Heritage Site iri Praslin iyo inoshamisa Vallée de Mai, imba yeinoshamisa coco- de-mer nati, uye kutsva muzuva rinopisa pamahombekombe akapfava mahombekombe akapoteredza zviwi.
Zano Redu: Seychelles zvitsuwa chine zvitsuwa zana neshanu, chimwe nechimwe chine hunhu hwadzo hwakajeka, hwakasarudzika, uye haudi kupotsa chimwe chazvo uchingofamba-famba muzvitsuwa mumotokari yekuhaya kana mukombi ine gwara rekushanyira rinokuratidza iwe neshamwari dzako inofanirwa kuona makwikwi echitsuwa kusvetuka ndeyechokwadi inofanirwa, kungave nendege kana chikepe; ronga rwendo rwako kuburikidza neanobvumidzwa munharaunda opareta yerwendo rwakatsaurirwa.
Isu tinokurudzirawo zuva revasikana kubuda, tichitora mukana wekukwezva emahombekombe ayo anogara ari pamusoro pezvinyorwa zve'nyika zvakakwana ', senge Anse Lazio paPraslin Island kana kunyange La Digue's Anse Source D'Argent, mapikicha ayo anovimbiswa kuita yako mhuri uye shamwari dzakasvibirira negodo. Kune vanoda zvisikwa uye kumwe kurovedza muviri, isu tinopa nzira dzinoyevedza dzakakomberedza zviwi; mazhinji akavhurika kune akakosha mavistas - uye marezinesi ekushanya mafambiro anonyatsoziva mune zvemuno marore. Rwendo rwechikepe kuSte. Anne Marine Park kuyemura zvinokatyamadza zvisikwa zvegungwa ndizvo zvinofanirwa; tora rwendo uende kunzvimbo dzinozvitsuwa dzakadai seCurieuse kana Cousin kuti unyurwe mumitambo inobudirira yekuchengetedza. Kuti uwane chiitiko chisingakanganwike, bhuku kugara kwenguva refu paBird Island, uko kungori nechaunga chevanhu chauchasangana nacho vari sooty terns vanouya kuzogara uye dendere pakati paMay naGumiguru, uye mamirioni acho haangatadze!
Zvigadzire iwe pachako
Kuita zvakanyanya kupukunyuka kwavo kudzoreredza mabhatiri avo, vasikana vakatarisa parwendo rwekuvandudza vachiri muSychelles; kuzorora padivi pegungwa uye padziva chairo chaive chikamu chakanakisa chevasikana-nguva yavo.
Zano Redu: Seychelles ine huwandu hwakawanda hweaspas ekunze; tora nguva yako kusarudza iyo inokodzera iwe zvirinani! Mushure mezvose, chikamu chakanyanya kukosha chenguva yemusikana pazororo kupomhodza nguva, hapana chinhu chiri nani kupfuura zuva ku spa nevanhu vako vaunofarira. Kukweshwa nezvimwe zvekunze zvigadzirwa zvakagadzirwa, zvakwizwa nezviwanikwa zvakasikwa senge citronella, coconut kana kunyange vanilla zvinonyatso bvisa kuneta nematambudziko ehupenyu husingaperi hwemazuva ano. Tora chinguva nevasikana vako kuti muende parwendo rwunoshandura uyezve kugadzirisa pfungwa, muviri nemweya.
Farira zvinwiwa zvecreole
Ndichiri pazvitsuwa, vakadzi vana vemuIsrael vakaenderera nerwendo rwekunakidza, vachinakidza mabhudhi avo nekunakirwa kunoshamisa kwechikafu checreole, inozivikanwa nemusanganiswa wayo wakakwana wemakwenzi nezvinonhuwira.
Zano Redu: Inogona kunge iri imwe yezvakanyanya kufadza zverwendo rwako, chikafu chekiresi zvirokwazvo chirongo chinonyungudika chetsika dzinobuda kubva musanganiswa weEuropean chili ine zvinokachidza kubva kune vanobva kune dzimwe nyika kubva kuIndia neChina. Pano iwe uchanakirwa nekunakisa kwema curry, hove dzinokatyamadza dzakabikwa nyowani kubva mugungwa, uye maquins akagadzirwa nezvinyowani-zvinobatwa zvegungwa. Kunze kwekudya kwakanaka, iwe unofanirwa kushanyira emunharaunda kutora-aways kunoenda maSeychellois, kuti iwewo ugone kunhuhwirira zvakanaka, chikafu chechinyakare nemitengo inokwezva, nemabhawa emuno uye masaki pamhenderekedzo yegungwa kune akanakisa mapipi ehupenyu hwako!